घर / डिजाइन ब्लग / रंग
र Color्ग, देखिने स्पेक्ट्रममा विद्युत चुम्बकीय विकिरण, रातो, सुन्तला, पहेलो, हरियो, निलो, वा बैजनीको रूपमा मानव आँखाको माध्यमबाट देखिन्छ। र us हाम्रो वरिपरि छ र धेरै मा हामी हामीलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न नसक्ने प्रभाव पार्छ। राम्रो ग्राफिक डिजाइनर, कलाकार, वा राम्रो राउन्ड मानव हुनको लागि - र use्ग प्रयोग र सन्तुलनको राम्रो पकड निश्चय पनि आवश्यकता हो। यस खण्डमा, हामी र colorको विभिन्न प्रकारहरूमा हेर्नेछौं किनकि यो डिजाइन र प्रिन्टिंगसँग सम्बन्धित छ र साथसाथै तपाईंको आफ्नै डिजाइनहरूमा रंग सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न रणनीतिहरू पनि हेर्छ।
भर्खरका रंग लेखहरू
यो भन्न सकिन्छ कि लोगो कम्पनीको चित्रण प्रतिनिधित्व हो। यो एक प्रतीक हो जहाँ चारै तिर जान्छ जहाँ संगठनले आफ्नो दाग छाड्छ। चित्र-श्रेष्ठता प्रभावका अनुसार, व्यक्तिहरू पाठ्य-उन्मुख हुनुको सट्टा दृश्यका सूचनाहरू व्यस्त पार्न र सम्झन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। फलस्वरूप, एक राम्रो लोगो पक्कै एक हो… थप पढ्नुहोस्
ब्रान्डिङ / रंग / ग्राफिक डिजाइन / लोगो डिजाइन
सँगै रचनात्मक डिजाइनको साथ, तपाईको व्यवसायलाई ब्रान्ड बनाउन छनौट गर्ने र colors्गहरूले तपाईका ग्राहकहरूलाई देख्न मिल्छ। ती रंगहरू हुन् जुन तपाईं आफ्नो लोगो डिजाइन गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईंको वेबसाइट निर्माण गर्न, तपाईंको मार्केटिंग कोलटेरल डिजाइन गर्नुहोस्, र हुनसक्छ तपाईंको ईट्टा र मोर्टार स्थान सजावट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। ब्रान्ड र Color्ग छनौट अहिलेको भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ ... थप पढ्नुहोस्
ब्रान्डिङ / रंग / लोगो डिजाइन
समान र पूरक रors्गहरू - के भिन्नता छ र म तिनीहरूलाई मेरो ग्राफिक डिजाइनहरूमा कसरी प्रयोग गर्छु?
र Color एक डिजाइनमा सब भन्दा आधारभूत तत्व हो। सही र Ch्ग छनौट गर्नु कुञ्जी हो कि डिजाइन मार्केटिंग, पदोन्नती, ब्रान्डि,, वा केवल एक खाली ठाउँ भर्नको लागि हो। र colors्गको बुझ्न धेरै चीजहरूमा निर्भर हुन्छ, र र country्गको प्रत्येक देशमा फरक अर्थ हुन्छ किनभने विभिन्न संस्कृतिका मानिसहरूले र colors्गहरूलाई फरकसँग मिलाउँछन् ... थप पढ्नुहोस्
रंग / ग्राफिक डिजाइन / प्रिन्टिंग बेसिक्स
रंग: RGB बनाम हेक्स बनाम CMYK बनाम PMS (Pantone) - के फरक छ?
पाना-फेड अफसेट प्रिन्टिंग प्रक्रिया
अफसेट प्रिन्टिंग यहाँ हाम्रो रोटी र माखन हो Print Peppermint। चाहे हामी--रंग प्रक्रिया प्रिन्टिंग गर्दैछौं वा १ देखि २ र spot स्पट कलर प्रिन्टिंग। हामी पक्कै पनि लेटरप्रेस प्रिन्टिंगको केहि थोरै गर्छौं र कहिलेकाँही डिजिटल प्रिन्टि inमा अलिकति ड्याबल गर्दछौं। तर हामी धेरै व्यस्त छौं र आवश्यकता महसुस गर्दैनौं। थप पढ्नुहोस्
रंग / हेइडलबर्ग / मुद्रण / प्रिन्टिंग बेसिक्स
Macallan सँगको सहकार्यमा "द म्याकलन संस्करण पर्पल" अनावरण गरियो Pantone रंग संस्थान
मोरामा रहेको प्रख्यात डिस्टिलरी कम्पनी म्याकालनले भर्खरै द म्याकालन एडिशन न ..5 जारी गर्‍यो, जुन अद्भुत र असाधारण बोनसको साथ मिठो स्वाद दिँदै ह्विस्की थियो: पीसीआईमा पेशागतहरूबाट आएका नयाँ, सँगसँगै र Pantone रंग संस्थान। द म्याकलन संस्करण पर्पलको रूपमा पनि चिनिन्छ, यो नयाँ रंगले बक्स र बोतलहरू सुशोभित गर्नेछ ... थप पढ्नुहोस्
ब्रान्डिङ / रंग
बेवाच रेड: बेवाच-आइकोनिक टिभी श्रृंखलाको th० औं वार्षिकोत्सव मनाउन
सबैभन्दा लोकप्रिय र लामो चल्ती टिभी श्रृ -्खला मध्ये एक, बेवाच अब आफ्नो अस्तित्वको th० औं बर्ष मनाइरहेको छ। यो टिभी श्रृंखला अमेरिकामा मात्र देखिएको होईन, साथै विश्वभरि पनि। सबै समयको आइकोनिक टिभी श्रृ series्खलाको th० औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा, फ्रेन्मेन्टल, एक अन्तर्राष्ट्रिय निर्माताले… थप पढ्नुहोस्
रंग / मार्केटिङ
प्रकट भयो! कसरी तपाइँको ब्यापार कार्डका लागि उत्तम र ?्गहरू छनौट गर्ने?
प्रकट भयो! कसरी तपाइँको ब्यापार कार्डका लागि उत्तम र ?्गहरू छनौट गर्ने? आजको डिजिटल संसारमा, यो विश्वास गर्न सजिलो छ कि ब्यापार कार्डहरू अप्रासंगिक छन्। यद्यपि यो निश्चित रूपमा होइन। प्रत्येक २,००० व्यापार कार्डहरू वितरणको लागि, कम्पनीको बिक्री औसत २. percent प्रतिशतले बढ्छ। व्यवसायलाई हस्तान्तरण गर्न धेरै योग्यता छ ... थप पढ्नुहोस्
व्यापार कार्ड आधारभूत / रंग / ग्राफिक डिजाइन
के रमाईलो रंगले तपाईलाई खुशी बनाउँछ?
के रमाईलो रंगले तपाईलाई खुशी बनाउँछ? के तपाइँ तपाइँको चरणमा पेपको एक बिट थप्न खोज्दै हुनुहुन्छ? खुशी रंगहरू प्रयोग गरेर यो गर्नका लागि मात्र तरिका हुन सक्छ। जान्नुहोस् कुन र you्गले तपाईंलाई खुशी पार्न सक्छ। के कालो पोशाकले तपाईंलाई पातलो देखिन्छ? एक किराना बजार पहेँलो पेंट तपाईं बनाउन… थप पढ्नुहोस्
रंग / ग्राफिक डिजाइन / मार्केटिङ
इन्द्रेणीमा कति रंगहरू छन्? डिजाईनमा वेल्डिंग र Color्ग
इन्द्रेणीमा कति रंगहरू छन्? डिजाईन कलरमा वेल्डिंग कलरले हाम्रो विश्व उज्ज्वल र हाम्रो डिजाइनहरू पप गर्दछ। त्यसो भए इन्द्रेणीमा कति रंगहरू छन् र हामी तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने? यहाँ यसको बारेमा सबै जान्नुहोस्! जब तपाइँ बालवाडीमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईले रॉय जी बिवको बारेमा सबै कुरा सिक्नुभयो। त्यहाँ सात रंगहरू छन् ... थप पढ्नुहोस्
रंग / डिजाइन
Col रors्ग तपाईंको लोगो पप र वाह तपाईंको दर्शक बनाउन
Col रंगहरू तपाईंको लोगो पप र वाह तपाईंको दर्शक बनाउनका लागि सही रंगहरू प्रयोग गर्दा तपाईंको लोगो पप बनाउने र तपाईंको दर्शकहरूलाई वाह गर्ने उत्तम तरिका हुन सक्छ। यहाँ4महान रंग विचारहरू जाँच गर्नुहोस्! त्यसोभए, तपाइँ व्यापार सुरू गर्दै हुनुहुन्छ र यसलाई भूमिबाट हटाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? लीप लिनु भएकोमा बधाई छ र ... थप पढ्नुहोस्